Mamela ny izaho
« Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin’i Kristy. » Fil. 3:7.
Amin’ny alalan’ny fiangonana no tokony hanehoana amin’izao tontolo izao ny fitiavan’i Jesôsy feno fahafoizan-tena. Ny ohatra asehon’ny fiangonana amin’izao fotoana izao dia fanehoana diso ny toetran’i Kristy sy fanomezana fiheveran-diso momba Azy amin’izao tontolo izao. Mandroaka ny fitiavana an’i Jesôsy eo amin’ny fanahy ny fitiavana ny izaho ka izany no tsy mampisy hafanam-po sy fitiavana mafana firy ho Azy izay tia antsika taloha. Fo marobe tokoa no mamela ny toerana ambony indrindra ho an’ny izaho; lany amin’ny fanomezana fahafaham-po ny tena na ny eritreritra na ny fotoana na ny vola, kanefa dia fanahy maro izay namoizan’i Kristy ny ainy no tonga amin’ny fahaverezana.
Izany no mahatonga ny Tompo tsy ho afaka hizara amin’ny fahafenoany ny fitahiany amin’ny fiangonana. Raha hankasitraka azy ireo amin’ny fomba miavaka eo anatrehan’izao tontolo izao Izy dia toy ny mametraka ny tombokaseny eo amin’ny asany, izay vao mainka hanamafy izany fanehoana diso momba ny toetrany izany. Rehefa hiala amin’izao tontolo izao ny fiangonana ka ho tafasaraka amin’ny fitsipiny sy ny fahazarany ary ny fomba amam-panaony, dia hiara-miasa amin’ny vahoakany ny Tompo Jesôsy. Handrotsaka amin’ny fahafenoany ny Fanahiny eo aminy Izy ka dia ho fantatr’izao tontolo izao fa tian’ny Ray izy ireo. Mbola ho revo ao anatin’ny fitiavan-tena ihany ve ny vahoakan’Andriamanitra? Efa miandry fotsiny ny harotsaka eo aminy ny fitahian’Andriamanitra saingy tsy mbola homena amin’ny fahafenoany izany satria mbola lomorin’ny toe-tsaina sy ny fomba amam-panaon’izao tontolo izao izy ireo. Misy avonavona ara-panahy eo aminy. Raha hanao araka izay irin’ny fony àry ny Tompo, dia vao mainka hampiorina azy ireo ao amin’ny fanandratan-tenany sy ny avonavony izany.
Mbola fanehoana diso an’i Kristy ihany ve no hasehon’ny vahoakantsika? Mbola ho lavitry ny fiangonan’i Kristy ihany ve ny fahazavana avy any an-danitra vokatry ny toetran’izy ireo matimaty? Izany mihitsy no hisy raha tsy mbola misy ny fikatsahana lalina indrindra an’Andriamanitra sy ny fandavana an’izao tontolo izao ary ny fanetren-tenan’ny fanahy eo anatrehan’Andriamanitra. Mila mandalo amin’ny alalan’ny fiangonantsika ny herin’Andriamanitra manova fo. — HoM, 01 Nôvambra 1890.